famous muslim sports players Archives - News @ M-Media
Post Tagged with: "famous muslim sports players"
ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံဟောင်း မိုဟာမက်အလီ (၇၄)နှစ် ကွယ်လွန်
ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၆ M-Media . ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ ၃ ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် လက်ဝှေ့ကျော် မိုဟာမက်အလီဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖီးနစ်မြို့ ဆေးရုံတွင် ကုသမှု ခံနေရမှ ဒီကနေ့မှာ[Read More…]
June 4, 2016 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ, နိုင်ငံတကာသတင်း
ကျွန်တော် ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်လက်ခံရသလဲ ? (Kareem Abdul-Jabbar)
ဧပြီ ၂၈ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ကျွန်တော် ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်ကို သက်ဝင်လက်ခံရသလဲ ? (Kareem Abdul-Jabbar- အမေရိကန် နာမည်ကြီး ဘတ်စကက်ဘော ကစားသမား) အမေရိကားမှာ မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းက မလွယ်လှပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်[Read More…]
April 28, 2015 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ
အလ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အိုလံပစ် ရွှေဆုရှင် ဟစီဘာ ဘိုးလ်မာကာ
ဧပြီ ၈ ၊ ၂၀၁၅ M-Media လေးမောင် တင်ဆက်သည်။ ဟစီဘာ ဘိုးလ်မာကာ (Hassiba Boulmerka) ကို ၁၉၆၈ ခု၊ ဂျူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အလ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက် ကွန်စတန်တိုင်မြို့တွင်[Read More…]
April 8, 2015 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ, ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ
တိုက်စစ်မှူး ဒမ်ဘာဘား Bestikas မွတ်စလင်မ် ပရိတ်သတ် အတွက် ဝတ်တက် နှိုးဆော်သူပြုလုပ်မည်
ဒီဇင်ဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – တူရကီ ကလပ် Bestikas အသင်း၏ ဆီနီဂေါတိုက်စစ်မှူး ဒမ်ဘာဘားမှာ အရုဏ်တက် ၀တ်ပြုမှု (မွတ်စလင်များ တနေ့ ၅ ကြိ်မ် ဝတ်ပြုမှု၌ မနက်နေမထွက်ခင်[Read More…]
December 1, 2014 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ, အားကစား
ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၄ M-Media အီဂျစ် Para-table tennis ချန်ပီယံ အီဗရာဟင်မ် ဟာမဒ်တို Ibrahim Hamadto ၏ အစွမ်းပြရိုက်ချက် စတင်လေပြီ။ ဘက်တံကို ပါးစပ်နှင့်ကိုက်ခဲထားလျက် သူ့ညာဖက်ခြေဖြင့် ဘောလုံးကို[Read More…]
June 11, 2014 — ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ, နိုင်ငံတကာသတင်း